UVicente Blasco Ibáñez ubhiyozela umhla wokuzalwa kwakhe. Amanye amabinzana emisebenzi yakhe | Uncwadi lwangoku
UVicente Blasco Ibáñez ubhiyozela umhla wokuzalwa kwakhe. Amanye amabinzana avela kwimisebenzi yakhe
Umzobo weBlasco Ibáñez. UAntoni Fillol eGranell (1900).
Don UVicente Blasco Ibáñez namhlanje ngumhla wokuzalwa kwakhe. Izolo kuphawule iminyaka engama-90 yokusweleka kwakhe, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo kusoloko kulunge ngakumbi ukubhiyozela ukuzalwa. Ke namhlanje ndiyamkhumbula lo mbhali waseValencian ene jonga umsebenzi wakhe kunye Ukukhetha amanye amabinzana esiyifumana kuyo.
1 UVicente Blasco Ibáñez
2 Amanye amabinzana avela kwimisebenzi yakhe
2.2 Iingcongolo nodaka
2.3 Abakhweli bamahashe abane besityhilelo
2.4 Imithi yeOrange
2.6 bucala ngasekhohlo
UVicente Blasco Ibáñez
Ungomnye wababhali eyaziwayo kakhulu ekupheleni kwekhulu le-XNUMX nasekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX. Umsebenzi wakhe unokuthathwa njengowakaYehova yendalo, kodwa ikwanazo nezinto ezixity.
Wafunda ezomthetho, kodwa kungekudala umsebenzi wakhe wajika waya ku ukubhala kunye nezopolitiko. Wayengumxhasi kunye nomkhuseli we kwiriphabliki WayekwiCongress of Deputies amatyeli amabini. Wayengenguye nawuphi na umbutho wokubhala, kodwa wavelisa ukubizwa kwangoku blasquism eyayisisizathu sokuthinjwa kwakhe kumazwe afana ne-Italiya okanye iFrance.
Umsebenzi wakhe omninzi ubonakalisa ngokuchanekileyo Umbutho waseValencian welo xesha njengaye Umkhosi o Iingcongolo nodaka, kodwa impumelelo enkulu yamazwe aphesheya yeza nayo Abakhweli bamahashe abane besityhilelo. Yayingumsebenzi owawuthengiswa kwihlabathi liphela kwaye wenziwa ifilimu kabini.
Ukongeza kwi Abakhweli bamahashe abane besityhilelo, eminye imisebenzi isiwe kwimovie njengaye Igazi kunye nentlabathi, Mare Nostrum, Umsinga o Phakathi kwemithi yeorenjikananjalo Abafileyo bahamba y I-maja ehamba ze. Kwaye kufuneka siqaqambise i ulungelelwaniso lukamabonakude lwe Umkhosi o Iingcongolo kunye noMdaka Kwii-70s kwaye, kutsha nje, Phakathi kwemithi yeorenji o Ilayisi kunye ne tartana.
Amanye amabinzana avela kwimisebenzi yakhe
Babebodwa ngakumbi kunaphakathi entlango. ukungabikho kwentiyo kwakukubi kaliwaka kunoko kweNdalo.
Eli gumbi, limnyama kwaye lifumile, lakhupha umphunga wotywala, isiqhumiso esinyanzelekileyo, esasinxilisayo impumlo saphazamisa nokubona, senza umntu acinge ukuba umhlaba wonke uza kugutyungelwa ngumkhukula wewayini.
Njengoko wayefumene e-ofisini yakhe, amahlwempu huertana akhaliphileyo angena kwizitalato ezingcolileyo, ezazibonakala ngathi zifile ngelo lixa. Ngalo lonke ixesha, xa engena, waziva engonwabanga, isithukuthezi esiswini esibuthathaka. Kodwa umoya wakhe ongumfazi othembekileyo nogulayo wayesazi ukuba angawoyisa njani lo mqondo, kwaye ke waqhubeka nokuzingca okungenamsebenzi, ngekratshi lowasetyhini omsulwa, wazithuthuzela ukuze abone ukuba yena, obuthathaka kwaye onwabile lusizi, wayesengaphezulu kwabanye.
Yathambisa igadi yeziqhamo ngongcwalazi. Ngasemva, ngaphaya kweentaba ezimnyama, amafu ayenombala ngokukhanya komlilo okude; kwicala lolwandle iinkwenkwezi zokuqala zangcangcazela ngokungapheliyo; izinja zikhonkotha kalusizi; ngengoma ethandabuzayo yamaxoxo kunye neekrikethi ukukhwaza kweemoto ezingabonakaliyo kwakudidekile, kushenxa kude kuzo zonke iindlela zethafa elikhulu.
Amahlathi abonakala ngathi abuyela elwandle, eshiya phakathi kwawo kunye neAlbufera ithafa eliphantsi kakhulu eligutyungelwe luhlaza lwasendle, ngamanye amaxesha liqhekeke lishiti eligudileyo lamachibi amancinci.
Abakhweli bamahashe abane besityhilelo
Apho indoda yenza ubutyebi bayo kwaye yenze usapho, likho ilizwe lokwenyani.
Hooray yoxolo, Frenchy, kunye nobomi obulula! Xa indoda inokuhlala kamnandi kwaye ingekho semngciphekweni wokubulawa zizinto ezingaziqondiyo, likho ilizwe lokwenyani!
Imithi yeorenji, egqunywe ukusuka esiqwini ukuya phezulu ngeentyatyambo ezimhlophe ngobukhali bophondo lwendlovu, yayijongeka ngathi iphothiwe yimithi yeglasi.
Uthixo wam akandazi, akazi mntu. Imfama kwaye isithulu ebantwini, njengokuba kunjalo nangamandla endalo.
Banoyolo abantu abaswele iingcinga! Baya kuba noxolo kunye nokuziphatha okuhle!
Xa uhamba, ushiya izixeko, nokuba zintle kangakanani, unovuyo. Kukufuna ukwazi okuvuswayo, umoya wokhokho wenguqu nentshukumo, esihamba nathi njengelifa elivela koomakhulu nootatomkhulu bethu abakude kakhulu, oonothwal 'impahlana abangadinwayo behlabathi langaphambili. Silindelwe ntoni kwisigaba esilandelayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UVicente Blasco Ibáñez ubhiyozela umhla wokuzalwa kwakhe. Amanye amabinzana avela kwimisebenzi yakhe
UDonna Leon, uKumkanikazi woLwaphulo-mthetho, ukhalela uncedo egameni lomhlaba
UkuCwangciswa kokuSetwa kwaBacuphi baBasetyhini: IPetra Delicado